Vaovao - Fantatrao ve ny fomba fanaovana tavoahangy fitaratra？
Ny fizotry ny famokarana tavoahangy fitaratra dia ahitana indrindra: ① fanodinana akora mialoha. Torotoro ireo akora betsaka (fasika quartz, lavenona soda, vatosokay, feldspar, sns.) Mba hampamaina ireo akora mando, ary esory ireo akora misy vy mba hiantohana ny kalitaon'ny vera. ② Fanomanana fitaovan'ny batch. ③ Mitsonika. Ny fitaovana fitaratra vita amin'ny vera dia hafanaina amin'ny hafanana avo (1550 ~ 1600 degre) ao anaty lafaoro na lafaoro fandoroana mba hamoronana vera misy rano mitovy fanamiana, tsy misy miboiboika, ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famolavolana. ④Forming. Atsofohy ao anaty lasitra ny vera misy ranoka mba hanaovana ny vokatra fitaratra amin'ny endrika takiana aminy, toy ny takelaka fisaka sy fitaovana isan-karazany. ⑤ Fitsaboana hafanana. Amin'ny alàlan'ny fanaovana annealing, quenching ary dingana hafa, ny fihenjanana, ny fisarahana amin'ny dingana na ny fanaovana kristaly ao anaty vera dia esorina na hiteraka, ary ovaina ny firafitry ny fitaratra.
Voalohany, ny bobongolo dia tsy maintsy noforonina sy namboarina. Ny akora vita amin'ny vera dia mampiasa fasika quartz ho toy ny akora fototra, ary ireo fitaovana fanampiana hafa kosa dia atsonika anaty rano amin'ny hafanana ambony, ary avy eo atsindrona ao anaty lasitra, nangatsiaka, notapahana ary namboarina mba hamorona tavoahangy fitaratra. Ny tavoahangy fitaratra amin'ny ankapobeny dia manana famantarana henjana, ary ny famantarana koa dia vita amin'ny endrika bobongolo. Araka ny fomba famokarana, ny fananganana tavoahangy fitaratra dia azo zaraina amin'ny karazany telo: fitsofana tanana, fitsofana mekanika ary famolavolana extrusion. Araka ny firafitra, ny tavoahangy fitaratra dia azo zaraina amin'ireto karazana manaraka ireto: Voalohany, vera soda, faharoa, vera firamainty, fahatelo, vera borosilicate
Ny akora masaka tavoahangy fitaratra dia voajanahary, vato kuarza, soda kaustika, vatosokay, sns. Tsotra ny fizotry ny famokarana, maimaim-poana ny endriny ary miovaova, lehibe ny hamafiny, mahazaka hafanana, madio, mora diovina, ary azo ampiasaina miverimberina. Amin'ny maha-fonosana azy ireo, ny tavoahangy fitaratra dia ampiasaina amin'ny sakafo, solika, alikaola, zava-pisotro, fanosorana, kosmetika ary vokatra simika simika, sns, ary be mpampiasa.
Fotoana fandefasana: Jun-28-2020